Corona oo ku sii faafaysaa adduunka .. wararkii ugu danbeeyey iyo Talaal Tijaabo ah oo mareykunku soo saaarey – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Corona oo ku sii faafaysaa adduunka .. wararkii ugu danbeeyey iyo Talaal...
Iyadoo lala kaashanayo tiro mutadawiciin ah oo helaya qiyaasta tallaalka tijaabada ah si loogu daweeyo fayraska corona ee soo ifbaxay xarun cilmi baaris oo ku taal Seattle, USA, cudurka faafa wuxuu kusii fidaa adduunka oo dhan, isagoo duubaya caabuqyada cusub iyo dhimashada.
Komishanka Caafimaadka Qaranka ee Shiinaha ayaa sheegay in 13 qof ay u dhinteen fayraska Corona Isniintii, isaga oo tirada guud ee dhimashada cudurka u qaaday 3226 guud ahaan dalka.
Hubei, xudunta u ah fayraska, ayaa diiwaangeliyay 12 ka mid ah dhimashada kor ku xusan, kuwaas oo 11 ka mid ahi ay ku sugnaayeen magaalada Wuhan, ee xarunta gobolka.
Talaadadii, guddidu waxay tilmaameen in 21 kiis oo cusub la ogaadey, laga soo bilaabo 16 maalintii la soo dhaafay, waxayna tiradaasi kor u qaadday tirada guud ee kiisaska la xaqiijiyay ee ku sugan badweynta Shiinaha 80,881.
Daraasiin dhaawacyo ah oo ka dhacay Thailand
Sarkaal reer Thai ah ayaa sheegay in waddankiisu diiwaangeliyay 30 xaaladood oo cusub oo ah coronavirus Talaadadii, taasoo ka dhigeysa tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka Aasiya ilaa 177.
Xog hayaha joogtada ah ee Wasaaradda Caafimaadka Dadweynaha Sukhum Kanchana Maya, ayaa u sheegay shir jaraa’id in 11 kiis oo lala xiriirinayo ciyaar feerka ah ay arkeen dhowr dhaawac oo laga duubay Coruna halka kiisaska kale ee la xiriira la shaqeynta ajaaniibta.
Wuxuu intaas ku daray in inta u dhaxaysa 70 iyo 80 boqolkiiba kiisaska Thailand laga diiwaan geliyo caasimada Bangkok.
Venezuela ayaa ku soo rogtay dalka karantiil
Madaxweynaha Venezuela Nicholas Maduro ayaa Isniintii meel mariyey in la soo rogo talaabooyin karantiil oo laga qaadayo dhammaan qeybaha dalka, si loo yareeyo faafitaanka cudurka cusub ee Corona, oo illaa iyo hadda saameyn ku yeeshay 33 qof oo ku nool waddanka Latin Amerika.
Maduro ayaa khudbad telefishanka ka sheegtay, “laga bilaabo Talaadada, Venezuela waxay gali doontaa dhagaxaan buuxa,” ayuu Maduro ku sheegay cinwaankiisa telefishanka, isagoo xusay in “talaabadan xag-jirka ah ee loo baahan yahay” ay ku jiri doonto “dalka intiisa kale.”
Madaxweynaha ayaa sheegay in go’aankiisa uu la micno yahay in la hakiyo dhammaan howlihii xirfadleyda ahaa ee ka jiray dalka, marka laga reebo kuwa la xiriira qeybinta cuntada iyo waaxda amniga, difaaca, caafimaadka iyo gaadiidka.
Dhaawacyo cusub ayaa laga helay Mongolia
Guddiga Gurmadka ee Mongolia ayaa Talaadadii shaaciyey inay ogaadeen seddex xaaladood oo cusub oo ah coronavirus ah oo ka dhex dhacay muwaadiniin laga soo celiyay Kuuriyada Waqooyi iyo Jarmalka.
Gudiga ayaa cadeeyay in bukaanka kasoo jeeda Jarmalka uu kujiro xaalad halis ah.
Mongolia, oo xidhay xuduudeeda koonfureed ee Shiinaha, ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqday inay ogaatay kiiskii ugu horreeyay ee fayras, oo ah muwaadin Faransiis ah oo ka shaqeeya gudaha dalka.
Dowladda Turkiga waxay ku dhawaaqeysaa natiijada dadka qaba corona
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay fiidnimadii Isniinta in tirada dadka uu ku dhacay viruska cusub ee cudurka Corona ee dalka ay gaarayaan 47 qof, iyada oo si weyn loo adkeynayo si loo adkeeyo tillaabooyinka lagula dagaallamayo cudurka faafa iyada oo ka hortagaysa in kooxdu ku tukato masaajidda, xiritaanka tiyaatarada iyo shineemooyinka, iyo in la hakiyo duullimaadyadii ay la galeen dalal dhowr ah.
Wasiirka Caafimaadka Fakhruddin Kujah wuxuu sheegay in 29 xaaladood oo cusub oo fayraska ah la duubay 24-kii saac ee la soo dhaafay, taasoo ka dhigeysa tirada dadka cudurkaasi hayo 47.
48 cudurro cusub oo South Korea ah
Kuuriyada Koofurta Kuuriya ayaa soo werisay 84 kiis oo cusub oo ah cudurka coronavirus, taasoo tirada guud ee cudurrada gudaha dalka ka dhigaysa 8,320, Xarunta Talada iyo Kahortagga Cudurrada Kuuriyada Korea ayaa sidaas sheegay Talaadadii.
Tani waa maalintii saddexaad oo isku xigta tirada tirakoobka cusubi ay ka hoos martay boqol marka loo barbar dhigo 29-kii Febraayo, markii caabuqa uu ka dillaacay 909.
Madaxweynaha Koonfurta Kuuriya Moon Jae-in ayaa Isniintii sheegay inuu kalsooni ku qabo in waddankiisu ka gudbi karo fayraska maadaama heerka caabuqa uu sii waday hoos udhaca inkasta oo ay masuuliyiintu ku dhawaaqeen cudur kale oo weyn oo ku dhaca Seoul, caasimada.
Dhowr waddan oo adduunka ah ayaa duubay horumarro la taaban karo oo la xiriira faafitaanka faafa, kuwa soo socda ayaa ah kuwa ugu xusid mudan:
Tirada kiisaska la xaqiijiyey ee cudurka coronavirus-ka ee Jordan ayaa kor u dhaaftay 35.
Tirada dadka qaba cudurka HIV ee Israel ayaa gaadhay 304.
Kyrgyzstan waxay ka hortagtaa ajaaniibta inay soo galaan dhulkooda sababo la xiriira viruska Corona.
Gobolka Ciraaq ee Basra wuxuu ku dhawaaqay diiwaangelinta geerida labaad ee fayraska Corona, Ciraaq wuxuu ku dhawaaqay diiwaangelinta 21 kiis oo cusub oo faafa.
Pakistan ayaa xaqiijisay geerida ugu horeysa ee Koruna dalka.
Wasaaradda Caafimaadka ee Kuweyt ayaa ku dhawaaqday, Talaadadii, in toddobo kiis oo cusub oo ah cudurka Corona laga diiwaan geliyey gudaha waddanka, afhayeenka wasaaradda, Abdullah Al-Sind, wuxuu yiri intii uu socday shir jaraa’id in toddobo xaaladood oo cusub oo la xaqiijiyay in lagu xaqiijiyay gudaha Kuwait 24-kii saac ee la soo dhaafay, taas oo keentay tirada Kiisaska ayaa loo diiwaan galiyay dalka 130 kiis, sida lagu sheegay waxa soo xigtay Wakaaladda Wararka ee Kuwait “KUNA”.
Ciidamada Jordan waxay sheegeen in la geyn doono iridaha laga galo magaalooyinka waaweyn ee Boqortooyada iyadoo qeyb ka ah dadaallada looga hortagayo fiditaanka Corona.
Iiraan waxay ku dhawaaqday sii deynta 85,000 oo maxaabiis ah, oo ay ku jiraan maxaabiis siyaasadeed, sababo la xiriira faafitaanka viruska Corona.
Mas’uuliyiinta Iiraan waxay kormeereen 1178 kiisaska cusub ee fayraska Corona 24-kii saac ee la soo dhaafay, marka lagu daro duubista 135 dhimasho oo cusub, taasoo tirada dhimashada u dhigeysa 988 dartiis sababo la xiriira fayraska Corona.
Hindiya waxay mamnuucday gelitaanka soogalootiga ka yimaada Yurub iyo Turkiga.
Wasaaradda Caafimaadka Isbaanishka ayaa sheegtay in tirada dhimashada cudurka Corona ay gaartay 491 halka infekshinka ay gaareyso 11,178.
Waxaa xusid mudan in tirada dadka uu ku dhacay cudurkaan ay gaareen 185371, ilaa iyo hadda 7331 ayaa la diiwaangeliyay, waxaana la daaweeyay 79951 bukaan.
Xukuumada Somaliland ayaa Been Abuur Iyo Riyo Ku Tilmaamtey Inuu Farmaajo...
Ma Isbedel Ayaa Ku Yimid Miisaankii Madaxtooyada Mise Kalsoonideedii Ayaa Hoos...